Ebe kacha mma isi obodo zuru ụwa ọnụ maka ndị njem nlegharị anya US
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Ebe kacha mma isi obodo zuru ụwa ọnụ maka ndị njem nlegharị anya US
Airlines • Airport • Aviation • Akụkọ Bahrain na -agbasa • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • India na -agbasa ozi ọma • Akụkọ kacha ọhụrụ na Indonesia • Akwụkwọ akụkọ Kuwait • Akụkọ na -agbasa ozi Malta • Akụkọ Oman • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • trending Ugbu a • Turkey na -agbasa News • Akụkọ na -agbasa UAE
Ebe kacha mma isi obodo zuru ụwa ọnụ maka ndị njem nlegharị anya US.
Iji chọpụta isi obodo kacha mma ịga leta ezumike, ndị ọkachamara na -ahụ maka njem enyochala isi obodo iri isii na itoolu mepere emepe n'ọtụtụ ihe gụnyere ọnụ ahịa ụlọ oriri na ọ transportụ transportụ, amụma ihu igwe nkezi, yana ọnụ ọgụgụ ebe nkiri na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ.
Ankara, Turkey bụ isi obodo kacha mma maka ọnụ ahịa ụlọ oriri na nkwari akụ, yana ọnụ ahịa nkezi bụ $ 45.74 kwa abalị.
Luxembourg nwere ụgbọ njem ọha na -akwụghị ụgwọ ọ bụ ya bụ isi obodo kacha mma maka njem na ụwa.
Valletta, Malta bụ isi obodo kacha mma maka ebe nkiri (311 kwa KM kwa sq) yana maka ụlọ nri (442.6 KM kwa sq).
Ka oge oyi na -abịaru nso, obodo bụ ebe kachasị mma iji gaa ezumike, juputara na nza ime ihe ọ bụla ihu igwe.
Na ndị njem na-atụ anya ịgbanarị USA ugbu a, na -ebuli mmachi njem, isi obodo gburugburu ụwa na -enye ebe ezumike obodo kacha mma.
Ma olee isi obodo kacha mma maka ndị njem nleta?
Iji chọpụta isi obodo ndị kacha mma ịga na ezumike, ndị ọkachamara njem enyochala isi obodo 69 mepụtara n'ọtụtụ ihe gụnyere ọnụ ahịa ụlọ oriri na ọṅụṅụ na njem, nkezi amụma ihu igwe, na ọnụ ọgụgụ ebe nkiri na ụlọ oriri na ọṅụṅụ.
Isi obodo iri kacha mma maka ndị njem gburugburu ụwa
n'usoro Isi Obodo Country Ọnụ ego nke ụlọ nkwari akụ ($) Nkezi Otu Ụgwọ Tiketi Ahịa Ọha Ọha Obodo ($) Nkezi okpomọkụ (ogo c) Nkezi mmiri ozuzo kwa afọ (mm) Ọnụọgụ nke ebe nkiri Ọnụọgụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ Ọnụ ọgụgụ
9 Ankara toro toro $ 45.74 $ 0.42 12.00 451 532 3,888 5.53
10 Jakarta Indonesia $ 81.77 $ 0.28 26.70 2,097 793 8,958 5.48
Valetta, Malta ekpughere dị ka isi obodo kacha mma n'ụwa nwere mkpokọta 6.74 n'ime 10, yana ọnụ ọgụgụ kacha elu nke ebe nkiri na ụlọ oriri na ọ ofụ ofụ nke isi obodo niile.
Abu Dhabi, isi obodo UAE, nọ n'ọkwa nke abụọ na akara 6.24 n'ime 10. Nkezi okpomọkụ dị n'obodo ahụ dara ogo 27.92 na nkezi mmiri ozuzo bụ naanị 42mm kwa afọ, na-eme ka nke a bụrụ ebe dị mma ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-achọ anyanwụ.
New Delhi, India nọ n'ọkwa nke atọ yana nkezi akara nke 6.06 n'ime 10, yana nkezi okpomọkụ na-eru ogo 25 na ụlọ nri 12,409 ịhọrọ.
Nghọta ndị ọzọ:
Bangkok, Thailand bụ isi obodo kachasị mma maka okpomọkụ yana nkezi 26.6 degrees.
Cairo, Egypt nwere ntakịrị mmiri ozuzo na -enwe naanị 18mm nke oke mmiri ozuzo kwa afọ.